Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Clinical examination လူနာအား မေးမြန်း စစ်ဆေးခြင်း
လူနာ၏ ရောဂါအကြောင်းကို သေသေခြာခြာ၊ တိတိကျကျ၊ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မေးမြန်းရမည်။ Complaints (C/o) or Chief complaints (C/C) လူနာကပြောသော တိုင်တန်းချက်များကို မေးမြန်းမှတ်သားရသည်။ ဘယ့်ကြောင့် ဆေးခန်းသို့ လာရသနည်း။ ၎င်းတို့မှာ Symptoms ရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။ ပြောပြချက်ရှိသမျှ (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ ရေးမှတ်ပါ။ Complaints တခုတိုင်းသည် Duration မည်မျှကြာသည်ကို မေးပါ။ လူနာပြောသည့် စကားအတိုင်းရေးမှတ်ပါ။
မေးသင့်သော မေးခွန်းများ မေးရမည်။ ဥပမာ မည်သည့်အချိန်မျိုး၌ ရောဂါကို ခံစားရသည်။ မည်မျှ ဆိုးသည်။ မည်သည့် နေရာ၌ အတိအကျကျဖြစ်သည်။ မည်သည့် အရပ်မျက်နှာသို့ ကူးသွားသည်။ မည်သည့် အချိန်၌ ပိုဆိုးသည်။ မည်သို့ နေလျင်၊ သက်သာသည်။ အမျိုးသမီးဖြစ်ပါက လစဉ်ရာသီအကြောင်း၊ သွေးဆုံးခြင်း၊ အိမ်ထောင်ရှိ-မရှိ၊ မွေးလမ်းမှ တမျိုးမျိုး ဆင်းခြင်း။ Family history မိသားစု ကျန်းမာရေးရာဇဝင်။ မိသားစုအတွင်း ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ ပန်းနာစသည့် ရောဂါရှိ သလား။ ပတ်ဝန်းကျင် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ။ ဥပမာ (တီဘီ) ရောဂါရှိသူနှင့် တအိမ်တည်း နေဘူးသလား။ အလုပ် အကိုင် အမျိုးအစား၊ Past Medical History နောက်ကြောင်း ကျန်းမာရေးရာဇဝင်။ အရင်ကလည်း ဤသို့ ဖြစ်ဘူးခြင်း ရှိ-မရှိ။ ဆေးရုံတက် ဘူးခြင်း ရှိ-မရှိ။ ငှက်ဖျားရောဂါရဘူးခြင်း ရှိ-မရှိ။ ဓါတ်မှန်-(အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ဘူးခြင်း၊ ခွဲစိတ် ကုသ ခံရဘူးခြင်း၊ ဆေးမတည့်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်-အရက်-မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲခြင်း။
Cold extremeties ခြေလက်-အရေပြား အေးစက်နေခြင်း၊ Fever ဖျားခြင်း၊ Anemia မျက်ခွန်လှန်ကြည့်၍ ဖြူနေခြင်း၊ Jaundice ဝါနေခြင်း၊ Glaucoma မျက်လုံးအတွင်း ဖိအား များခြင်း၊ Liver အသဲ၊ Spleen ဘေလုံး၊ Kidney ကျောက် ကပ်ကြီး-မကြီး။ Pregnancy ကိုယ်ဝန်၊ Uterus သားအိမ် အမြင့်။ Tenderness အလုံး-အကြိတ်-အနာတို့အားဖိသည့် အခါနာကျင်ခြင်း။ နေရာ၊ အရွယ်၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အပြော့အမာ၊ အပူအအေး၊ ချောမွေ့မှု-ကြမ်းတမ်းမှု၊ ရွေ့လျားမှု၊ Pulse လက်ကောက်ဝတ်သွေးခုန်ခြင်း၊ Oedema ကိုယ်ရောင်ခြင်း၊
နောက်ကြောတွင် လက်ဝါး ၁ ဖက် ညီတူညီညာ တင်၍ လက်မ သည် အသက်ရှူသွင်း-ထုတ်လုပ်စဉ် အလည်မျဉ်းမှ မည်မျှ အကွာအဝေးသို့ ရွေ့သနည်း ကြည့်ပါ။
လက်ဖြင့်ခေါက်၍ စမ်းခြင်းဖြင့် ထွက်သည့်အသံကို နား ထောင်ရမည်။ အဆုပ်တွင် လေရှိသောကြောင့် လှိုင်သံ Resonant sound ထွက်ရမည်။ အရိုး၊ ကြွက်သား၊ အသဲ တို့သည် Dull sound ထုံသံ ထွက်မည်။ အသဲသည် ညာဘက် နံရိုးကြား အမှတ်စဉ် မည်သည့် နေရာကစ၍ ထုံသနည်း။ ညာဘက်-ဘယ်ဘက် အသံတူ-မတူ။ Pleural effusion အဆုပ်အိတ်ထဲ ရေအောင်းခြင်း၊ Pneumonia အဆုပ်ရောင်နေလျင် ထုံသံထွက်မည်။ Pneumo-thorax အဆုပ်ထဲ လေများနေလျင် လှိုင်သံ ပိုထွက်မည်။
နောက်ကြောမှ အဆုပ်များအား ခေါက်၍ ပေါ်ထွက်လာသည့် အသံကို နားထောင်ခြင်း၊
အူများ၏လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် Peristalsis အသံများသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အသံရှိနေခြင်းသည် ပုံမှန်အလုပ် လုပ်နေခြင်းကိုပြသည်။ အသံနည်းခြင်းမှာ အိပ်နေစဉ်၊ ခွဲစိတ်ခံအပြီး၊ ဆေးများကြောင့်ဖြစ်ရသည်။ ဝမ်းချုပ် နေလျင်လည်းနည်းမည်။ Ileus သည် အူ မလုပ်မလုပ်သဖြင့် အသံလုံးဝမကြားရခြင်းဖြစ်သည်။ ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ အစာစားပြီး ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် များများကြားရမည်။ အူပိတ်ခြင်းကြောင့်လည်း များများကြားရမည်။
သွေးလွှတ်ကြောကြီးများအတွင်း လှည်လည်နေသည့်သွေးသည် သွေးလွှတ် ကြော နံရံအား မည်မျှဖိအား သက်ရောက်နေသည်အား Sphygmomanometer ဖြင့်တိုင်းသည်။ အထက်ဂဏန်းကို systolic pressure ဟု၎င်း၊ အောက်ဂဏန်းကို diastolic pressure ဟု၎င်း ခေါ်သည်။ ပျမ်းမျှ systolic pressure သည် 112.4 mm Hg နှင့် diastolic pressure သည် 64.0 mm Hg ဖြစ်သည်။
လက်ဖြင့်ခေါက်၍စမ်းခြင်း၊ ဝမ်းဗိုက်ထဲ အရည်များနေသည်အားစမ်းခြင်း
ဗိုက် တင်းနေ-မနေ၊ ဝမ်းဗိုက်ထဲရှိ အသဲ၊ ဘေလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ သားအိမ် ကြီး-မကြီး၊ အခြားအလုံး ရှိ-မရှိ။ ရှိလျင် နေရာ၊ အရွယ်အစား၊ နာကျင်မှု ရှိ-မရှိ၊ ရေ (ဖျင်းစွဲခြင်း)၊ ရှိ-မရှိ၊ ထို့ပြင် သီးခြားရောဂါများအတွက် စမ်းသပ်မှုများ၊ ဥပမာ Appendicitis အူအတက်ရောင်ခြင်း၊ Gastric perforation အစာအိမ်ပေါက်ခြင်း၊ Intestinal obstruction အူပိတ်ခြင်း၊
Lab Investigation ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း
ဆီး၊ သွေး၊ သလိပ်၊ ဝမ်း၊ စသည်တို့အား ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ဓါတ်မှန်။ (အာလ်ထွာဆောင်း)၊ စသည်တို့စစ်ဆေးပြီးမှသာ အမှန်ရောဂါအမည် Diagnosis (D) ရရှိသည်။ စမ်းသပ်မှုများအားလုံး မပြည့်စုံမီ Provisional diagnosis (P/D) ခန့်မှန်း ရောဂါအမည် နှင့် Differential diagnosis (D/D) ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရောဂါများကိုသာ သိမည်။
• Haemoglobin Male 14-18 grams/dl; Females = 12-16 grams/dl; Children: 11-13 gm/dl
• Red Blood Cell Count Males = 4.7-6.1 million/micro liter; Females = 4.2-5.4 million/micro liter
• Hematocrit Count Male = 42%-52%; Female = 37%-47%
• Platelet Count = 150 thousands to 450 thousand/micro liter
• White Blood Cell Count = 4.8-10.8 thousand/micro liter
• Neutrophils = 3,150 to 6,200
• Lymphocytes = 1,500 to 3,000
• Monocytes = 300 to 500
• Eosinophils = 50 to 250
• Basophils = 15 to 50
Examination of Lumps, Bumps, Tumor အလုံး၊ အကြိတ်၊ အနာတို့အား စမ်းသပ်ခြင်း
1. Site တည်နေရာ၊ (ဥပမာ ဘယ်ဘက် ရင်သား၏ အပေါ်-ညာဘက်ခြင်း)
2. Size အရွယ်အစား၊ (1” x 2” x 1”)
3. Shape ပုံသဏ္ဌာန်၊ (Circle or Oval)
4. Color အရောင်၊ Infection ရှိလျင် နီမည်။
5. Temperature အပူ-အအေး၊ Infection ရှိလျင် ပူမည်။
6. Pain and Tenderness နာ-မနာ၊ Pain = လူနာက ခံစား၍နာခြင်း၊ Tenderness = ဖိကြည့်မှ နာခြင်း၊
7. Consistency အပြော့-အမာ၊ (Soft, Firm, Hard, Stony hard) ကင်ဆာဖြစ်လျင် မာတတ်သည်။
8. Mobility ရွေ့ရှားနိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ၊ (Fixed or movable) တို့ကို သိအောင် စမ်းရမည်။ ကင်ဆာဖြစ်လျင် တွယ် ကပ်နေတတ်သည်။
9. Translucency အလင်းရောင်ဖြတ်သွားခြင်း ရှိ-မရှိ Hydrocele ခေါ် မုတ်ရောဂါ။
10. Reducibility လျှော့သွား-ဝင်သွားစေရန် လုပ်၍ ရ-မရ စမ်းခြင်။ Hernia အူကျရောဂါ။
• X-ray ဓါတ်မှန်၊ Plain X-ray, Barium meal, IVP
• Computed Tomography (CT) သည် ကွန်ပြူတာသုံး၍ သုံးဖက်မြင်ပုံဖေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
• Electrocardiography (ECG or EKG) သည် လျှပ်စစ်သုံး၍ နှလုံး၏အလုပ်ကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
• Electroencephalography (EEG) လျှပ်စစ်သုံး၍ ဦးနှောက်၏ အလုပ်ကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
• Ultrasound သည် လူ၏နားကမကြားနိုင်အောင် မြင့်မားသည့် အသံလှိုင်းသုံး၍ ကိုယ်အတွင်းရှိ အင်္ဂါအစိတ် အပိုင်းများကို ပုံဖေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
• Magnetic resonance imaging (MRI) သည် နူကလီယာ သံလိုက်အားသုံး၍ ကိုယ်အတွင်းရှိ အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်းများကို ပုံဖေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
• Pap smear (Papanicolaou test, Pap test, cervical smear) သည် သားအိမ်အဝ တွင် ပြောင်းလဲမှု ရှိ-မရှိ စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
• DNA profiling (DNA testing, DNA typing) သည် မှုခင်းဆေးပညာ၏ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်သည်။
• Complete blood count (CBC) သွေးစစ်ခြင်း၊
• Urine tests (Albumin, Sugar, Microscopic exam) ဆီးစစ်ခြင်း၊
• Blood sugar (Glucose) သွေးချိုစစ်ခြင်း၊
• Sputum for AFB (TB) သလိပ်စစ်ခြင်း၊